Maamulka gobolka Sh/dhexe oo ka mamnuucay indho shareerka iyo mootoyinka Bajaajta magaalada Jowhar – STAR FM SOMALIA
Maamulka gobolka Sh/dhexe ayaa ka mamnuucay haweenka inay xirtaan indho shareerta iyo in mootooyinka Bajaajta loo yaqaan aysan socon karin xilliyada habeenkii.
Maamulka gobolka Sh/dhexe ayaa ku macneeyay sababta loogaga mamnuucay magaalada indhoshareerta inay tahay iyadoo ay ku soo dhex dhuuman karaan rag doonaya in ay falal amni darro ka fuliyaan magaalada.
Agaasimaha Warfaafinta Maamulka gobolka Sh/dhexe C/karin Cumar Macalin ayaa sheegay in laga bilaabo 25ka bishan December aan la oggolaan doonin in haweenka indhaha shareerka ku dhex maraan magaalada Jowhar.
“Iyadoo laga duulayo adkeynta ammaanka degmada Jowhar oo dhowaan uu ku furmayo ayaa maamulka gobolka waxa uu go’aansaday in gebi ahaanba haweenku aysan xiran karin indho shareer iyo weliba in mootooyinka bajaajta iyo mootooyinka kale aysan xilliyada habeenkii aysan socon karin laga bilaabo maqribnimadii.”ayuu yiri Agaasimaha warfaafinta maamulka gobolka Sh/dhexe.
Ammaanka magaalada Jowhar ayaa aad loo adkeeyay iyadoo lagu wado in dhowaan uu shirka maamul u sameynta labada gobol ee Hiiraan iyo Shabelaha dhexe ka furmo magaalada Jowhar.
Ma aha markii ugu horeysay ee laga mamnuuco haweenka magaalada Jowhar inay xirtaan indho shareerta hase yeeshee maamulkii hore Maxamed Dheere ayaa ka mamnuucay xirashada indho shareerta.
Wasiirka Amniga Somaliya oo la kulmay Wasiirka Arrimaha Gudaha Masar